Faka iPlayOnLinux kwi-Ubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
Playonlinux sisimahla kunye nomthombo ovulekileyo wokubonisa imbonakalo yewayini evumela abasebenzisi beLinux ukuba bafake inani elikhulu leemidlalo zekhompyuter ezisekwe kwiWindows kunye nokusetyenziswa okunje ngeOfisi yeMicrosoft (2000 ukuya ku-2010), iSteam, iPhotohop, kunye nezinye izinto ezininzi.
I-PlayOnLinux nayo ikuvumela ukuba ufake isoftware yakho esekwe kwiWindows kwiidrive ezahlukeneyo, Oko kuthetha ukuba akukho nxibelelwano phakathi kwezicelo ezahlukeneyo ozifakayo. Ke ukuba kukho into engasebenzi kakuhle, uyazi ukuba ayizukuchaphazela zonke izinto zakho kwaye banokuyikhupha ngokulula ngokususa idrive ebonakalayo.
Faka imidlalo kunye neeapps ngeWayini Kunganzima kakhulu kwii-newbies. Ukulungiselela le nto, ukusetyenziswa kwePlayOnLinux kuyacetyiswa njengoko isombulula oku ngokunika isikhombisi esibonakalayo esilula, ekunqakraza nje okumbalwa okuya kukuvumela ukuba ufake ngokulula usetyenziso lweWindows kunye nemidlalo kwiLinux.
Ndiyathetha Konke ukuntsonkotha kwewayini kufihlwe ngokwendalo kwi-PlayOnLinux kwaye kulula ukuzenzekelayo ukufakwa kwesoftware ehambelanayo kunye nemidlalo.
I-PlayOnLinux ikwinguqulelo yayo engu-4.2.12 esele ikho ixesha elide, kuba okwangoku besakha inguqulelo engu-5.0 oko kuthetha ukuhambelana okungcono nesizukulwana esitsha samakhadi emizobo, imidlalo kunye nabanye.
1 Uyifaka njani iPlayOnLinux kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
2 Uyisebenzisa njani iPlayOnLinux?
Uyifaka njani iPlayOnLinux kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Kuba i-PlayOnLinux yindawo ephambili yomzobo weWayini, Kuyimfuneko kakhulu ukufaka iWine kunye nokwenza ukuba uyilo lweebhithi ezingama-32, ukufumana ukusebenza okungcono kwale nkqubo, kwi Inqaku langaphambili lithethe ngendlela yokufaka ingxelo yokugqibela ezinzileyo yewayini.
I-PlayOnLinux inokufumaneka kwi-Ubuntu software yokugcina, ukuze uyifumane kwi-Ubuntu Software Centre okanye uyifake ngalo myalelo ulandelayo:
Kukwacetyiswa ukuba ufake ezinye izixhomekeki ezinokuba yimfuneko:
Ungayifaka ngokukhuphela iphakheji yamatyala yamva nje, efumaneka kwiphepha layo qala apha.
Abaphuhlisi bacebisa ukusebenzisa le fakeli njengoko iqulethe iiphakheji zamva nje ezikhoyo xa kuthelekiswa nezinto ezikhoyo kwiziko lesoftware kunikezelo oluninzi.
Uyisebenzisa njani iPlayOnLinux?
Emva kokwenza ufakelo oluchanekileyo, siqhubeka nokuvula isicelo, siyijonge kwimenyu yezicelo zethu kwaye siyenze. Xa usungulwa, uya kucelwa ukuba wamkele ilayisensi yokufaka ezinye iifonti ezivela kuMicrosoft.
Ngale nto siya kuba ngaphakathi kwefestile ephambili yenkqubo, Apha ngokusisiseko kukho iindlela ezimbini zokufaka usetyenziso.
Okokuqala ukufaka usetyenziso oluhambelana ne-PlayOnLinuxOko kukuthi, siyifumene le kuluhlu olunikezelwa sisicelo, ngokunqakraza kwiqhosha "Faka" ifumaneka ngezantsi nje kwemenyu yakho.
Xa ucofa apho, iwindow entsha iya kuvula noluhlu ebendithetha ngalo, eApha kufuneka sisebenzise i-injini yokukhangela ukujonga ukuba ngaba isicelo esifuna ukusifaka siyafumaneka.
Ukuba kunjalo, nqakraza kuyo kwaye kufuneka silandele imiyalelo de icele ukuba sifake iCD / iDVD ngesicelo okanye ukhethe indlela apho igcinwe khona kwi-hard drive yethu.
Olwesibini ukhetho kukufaka usetyenziso "olungahambelaniyo"
Nangona igama elithi "aluhambelani" alisebenzi kuyo yonke into, kodwa okwangoku alikavavanywa iya kuba lixesha elichanekileyo. Kuba kukho okungapheliyo kwezicelo kuluhlu oludlulileyo, kuboniswa kuphela ezaziwayo nezaziwayo.
Apha indlela yokufaka ilandelayo:
Cofa kwindawo ethi "Faka"
Ifestile yezicelo iya kuvulwa, kodwa ngoku njengoko sinokubona apha ngezantsi kuluhlu kukho umbhalo othi "Faka inkqubo engafakwanga"
Sinqakraza kuyo kwaye apha siya kuqhubeka kunye newizard yokufaka
Iya kusicela ukuba sabele indawo kwinkqubo efakiweyo "Faka inkqubo kwidiski entsha ebonakalayo" kwaye ngokulandelayo.
Ngenisa igama lokumisela
Fumana ifayile yokufakela uze ulandele imiyalelo, eya kuxhomekeka kwisicelo osifakayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Faka iPlayOnLinux kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Umonakalo weGabe sitsho
Enkosi!!! Ndiyisebenzisa RUN Office 2010 =)
Phendula kumonakalo weGabe
Ndifakele Ubuntu Mate 18.04 kwaye bendisuka kwiforum ukuya kwiforum kangangeveki kwaye andikwazi ukwenza i-POL isebenze. Ifaka ngaphandle kwengxaki kodwa xa ufaka iOfisi ka-2010 okanye nayiphi na enye inkqubo ixhonywe kwisigaba sokugqibela xa usenza idrive ebonakalayo kwaye kukho iiyure. Ndizamile iinguqulelo ezahlukeneyo ze-POL, zewayini kwaye akukho tyala. Andifumani mpazamo naphi na ukuze ndikwazi ukuyisombulula. Ndisebenzise iOfisi ka-2010 nge-POL kwi-distros ezininzi ngaphambili kwaye oku akuzange kwenzeke kum. Naziphi na izimvo?
kunokwenzeka ukuba ufake i-ofisi ka-2016
Ityala lephepha lewebhu (4.2.12) indala kunendawo yokugcina izinto zangaphakathi (4.2.12-1) ke akunakucetyiswa ukusebenzisa elinye lephepha